Frankofonia faha-XVII: be ny zava-bita 2016 | NewsMada
Frankofonia faha-XVII: be ny zava-bita 2016
“Isika no filohan’ny Frankofonia tamin’ny fitondran’i Madagasikara izany nandritra ny roa taona ka nanao ny tatitra momba ny fanambaran’Antananarivo, tamin’ny fihaonana an-tampon’ny faha-XVI, novambra 2016: maherin’ny 80% ny vita tamin’izany. Nisongadina manokana i Madagasikara tamin’ny nanao an’io.”
Io ny nambaran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy, i Dovo Eloi Maxime, taorian’ny fivorian’ny minisitra nanomana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia faha-XVII, atao any Erevan, Arménie, nanomboka omaly. Nambarany fa tamin’ny nandraisan’i Madagasikara ny fihaonana faha-XVI, nandeha ny resaka hoe: ho vita sa tsia? Tamin’ireny koa no niverenan’i Madagasikara tamin’ny lamina sy fitondrana araka ny lalàmpanorenana eo anivon’ny fiombonambe iraisam-pirenena.
Raha jerena ny Frankofonia tao anatin’ny fanambaran’Antananarivo, indrindra amin’ny lafiny fandriampahalemana, ohatra: be dia be ny zava-bita, araka ny nambarany. Teo ny fikarakarana ny amin’i Bourondi, i RDC, i Centre Afrique, i Madagasikara… Eo koa ny momba ny vehivavy sy ny ankizy, ny tontolo iainana…
Anisan’ny anjara birik’i Madagasikara amin’izao fihaonana faha-XVII izao ny fankaherezana ireo firenena hanafoana ny fanamelohana ho faty fa mbola be ny firenena mitana izany. Hisy ny fanambaran’i Erevan amin’izao fihaonambe an-tampony izao. Eo koa ny famindram-pahefana eo amin’i Madagasikara sy i Arménie, ary ny fifidianana izay ho sekretera jeneralin’ny Frankofonia.